မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 11/01/2011 - 12/01/2011
ခရစ်စမတ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင် ကိုယ့်လူမျိုးဘာသာပွဲတော်မဟုတ်ပင်မဲ့ စိတ်ထဲမှာပျော်သလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ ခရစ်စမတ်သီချင်းတွေနားထောင်ချင်သလိုလို ခရစ်စမတ်အပြင်အဆင်လေးတွေပြောင်းချင်သလိုလို ကျွန်မ ဖြစ်တတ်ပါတယ်… အထူးသဖြင့် စကာင်္ပူကိုစရောက်ဖူးတဲ့အချိန်တုန်းက ခရစ်စမတ်အပြင်အဆင်တွေပြင်တဲ့ ဒီဇင်ဘာမှာဆိုတော့ ခရစ်စမတ်ကိုရောက်တိုင်း စကာင်္ပူစရောက်ခါစက အသားမကျဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ပြေစရာဆိုလို့ အမြင်ဆန်း အပြင်ဆန်းတွေဖြစ်တဲ့ သွားလေရာခရစ်စမတ် ဒီကိုရေးရှင်းတွေ ခရစ်စမတ်တီးလုံးသဲ့သဲ့တွေဟာလဲ ရောက်စတုန်းက အသားမကျတဲ့ ဒုက္ခတွေ အခက်အခဲတွေ ဘာမဟုတ်တဲ့ အမှားအယွင်းလေးတွေရှိပင်မဲ့ ဒီအပြင်အဆင်လေးတွေကြောင့် စိတ်သက်သာခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်လေးကို သတိရစေပြီး ပြုံးမိပါတယ်… (မှတ်ချက် ကျွန်မရောက်စ လွန်ခဲ့တဲ့ ၉နှစ်လောက်က မြန်မာပြည်မှာ ယခုလောက် ခရစ်စမတ်အပြင်အဆင်တွေ သိပ်မရှိသေးပါဘူး… “သိပ်” လို့သုံးထားတာ နည်းနည်းလေးတော့ရှိတယ်လို ဆိုလိုပါတယ်)
ကျွန်မစိတ်ထင် ခရစ်စမတ်ရောက်ရင် ပျော်သလိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဒီပွဲတော်ထက် ကိုယ်ငယ်ငယ်က Memory နဲ့ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်… ဒီဇင်ဘာဆို ကျောင်းတွေပိတ် ရာသီဥတုကအေးအေးနဲ့ လမ်းထဲမှာ ဘတ်မင်တန်ရိုက်၊ မနက်ထွက်လမ်းလျှောက်၊ ကျောင်းပိတ်ရက်ရှည်ရရင် မိသားစုခရီးထွက် စတာတွေက ငယ်ငယ်ကတည်က ဒီဇင်ဘာ ခရစ်စမတ်ကျောင်းပိတ်ရက်ကို မျှော်စေခဲ့တာတွေပါ…
အင်း… အတိတ်တွေ ပြန်ပြောင်းအောင့်မေ့နေတာနဲ့ လိုရင်းကခုမှရောက်တော့မယ်… ဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာလဲ ကျွန်မ အလုပ်သစ် ရုံးသစ်က နေသားမကျသေးတဲ့ နေရာလေးကို ကျွန်မနေသားကျပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင် အလှဆင်ချင်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ အင်တာနက်မှာ နှင်းပွင့်အတုလေးတွေကို လုပ်ဖို့ စာရွက်ဖြတ်နည်းလိုက်ရှာတော့ အောက်ပါပုံလေးတွေကို တွေ့ရင်း လိုက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်…
တွေ့တဲ့ ၀က်ပ်ဆိုက်ကတော့ http://www.instructables.com/id/Make-A-6-sided-snowflake/
ဓာတ်ပုံလေးတွေကို အဲဒိကယူပြီး အဆင့်လိုက်ပေါင်းပြီးတင်ပေးထားပါတယ်…
ထောင့်မှန်စတုဂံပုံ စာရွက်တစ်ရွက်ကိုယူပြီး အရှည်(အလျား) ဘက်မှ အလည်တည့်တည့်ကို ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းခေါက်ပါ…
ခေါက်ထားတဲ့ စာရွက်ရဲ့ နောက်ထပ်အလယ်ကို ခေါက်ပြီး အောက်နားလေးကိုပဲ အရာလေးထင်အောင်မှတ်လိုက်ပါ… အလယ်မှတ် မှန်အောင် အရာပေးပြီးမှတ်ရုံသာဖြစ်ပါတယ်..
ပြီးလျှင် အဲဒိ အလယ်အရာကို ဦးတည်ပြီး ပုံပါအတိုင်း အပိုင်း၃ပိုင်း ညီနေအောင်ခေါက်ပါ… အပိုင်း ၃ပိုင်း ညီနေဖို့ အရေးကြီးတဲ့အတွက် သေချာစွာညှိနှိုင်းပါ… အပိုင်း ၃ပိုင်းလုံးညီပြီဆိုမှ စာရွက်ကို သေချာစွာဖိပြီး ခေါက်ရာပေးလိုက်ပါ…
အပိုင်း ၃ပိုင်း မညီရင် ဘာဖြစ်မလဲလို ခေါက်ကြည့်တော့ ဟောဒီလိုဖြစ်ပါတယ်…
ပြီးလျှင် အဲဒိခေါက်ထားတဲ့ စာရွက်ကို အချွန်အတိုင်း နောက်ထပ် တ၀က်ထပ်ခေါက်ပါ… ဒီလိုမှ နှင်းပွင့်လေးက ၆ထောင့်ရှိမှာပါ… ခေါက်တဲ့အခါမှာ စာရွက်အတိုသားက အပြင်မှာရှိပါစေ… တခြားတစ်ဖက်မဖြစ်ပါစေနဲ့…
ပြီးလျှင် ပုံတွင် အမဲလိုင်းနှင့် ပြထားသည့်အတိုင်း စာရွက်ကို လိုက်ညှက်ပါ… ထိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ကြိုက်သလိုလဲ ပုံဖော်ညှက်နိုင်ပါတယ်…
ညက်ပြီးသွားလျှင် ပုံပါအတိုင်း ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်.. ညှက်နည်း ၂မျိုးကို ယှဉ်ပြထားတာပါ… မဗေဒါကတော့ ပထမညှက်နည်းလေးက ထွက်တဲ့ပုံကို ပိုကြိုက်ပါတယ်…
ဟောဒါကတော့ ဖြန့်လိုက်ရင် နောက်ဆုံးထွက်လာမဲ့ ပုံပါ…
မဗေဒါ ထိုင်တဲ့ ရုံက cubicle လေးကို စက္ကူနှင်းပွင့်လေးတွေနဲ့ ဒီလိုအလှဆင်ထားပါတယ်…
အပိုလေးပြချင်တာကတော့ (:D) ခုလောလောဆယ်မှာ ဆိုးထားတဲ့ နှင်းပွင့်ပုံလက်သည်းလေးပါ… G-market က ၀ယ်တဲ့ Stamp လေးတွေနဲ့ ဆိုးထားတာပါ… ဆိုးထားတာ ၃ရက်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ ပြတ်တဲ့ဟာက ပြတ်နေပါပြီ… ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ရိုက်ထားလို့ ပုံ အရည်အသွေးညံ့တာကို ခွင့်လွှတ်ပါ…
ဒီပုံလေးကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လက ခရစ်စမတ်ပိုး စောစီးစွာဝင်နေလို့ ဆိုးထားတဲ့ Christmas theme လက်သည်းလေးပါ.. အနီကို ထိပ်မှာဆိုးပြီး ရွှေရောင် အလက်လိုင်းလေး ၂ကြောင်းဖြတ်ထားတာပါ… ပြီးတော့ အစိမ်းရောင် အရွက်လေး၂ရွက် တစ်ဖက်စီက ကျနေတာပါ… Youtube က ဆိုးပြတာကို အရောင်ပြောင်းပြီး လိုက်လုပ်ထားတာပါ… ဒီပုံလဲ ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ရိုက်လို့ ၀ါးနေတာ ခွင့်လွှတ်ပါ…
Posted by mabaydar at 5:12 PM3comments :
Labels: General , nail art
အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူတွေအားလုံ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အလုပ်ကိုသွားပြီး တွေ့ကြုံနေရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အခက်အခဲတွေ လူမှုရေးအခက်အခဲတွေ စသည်ဖြင့်ရှိကြမှာပါ… ဒီပိုစ့်လေးနဲ့အတူ နေ့စဉ်အလုပ်သွားရမှာ ပျင်းနေတဲ့အချိန် လုပ်ငန်းခွင် အဆင်မပြေမှုဖြစ်တဲ့အချိန် သူဋ္ဌေးကရော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကရော ခိုင်းတာတွေတန်းစီပြီ စိတ်တိုလာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ မဗေဒါ စိတ်ထဲမှာ ခံယူတတ်တဲ့ စိတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်… ဒါက ခုစာဖတ်သူတွေအတွက် အသုံးဝင်ချင်မှလဲဝင်မယ်… မဗေဒါအတွက်တော့ အဲလိုလေးစိတ်ထဲထားလိုက်ရင် အလုပ်တွေများလာလို့ စိတ်ရှုပ်စိတ်တိုပြီး လူမှုရေးပါတစ်ခါတစ်လေထိခိုက်တတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးကိုထိမ်းဖို့ တော်တော်လေးတိုးတက်လာတယ်…
ဒါကတော့ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်က ဂိမ်းတွေကစားရင်းနဲ့ စရလာတဲ့ အတွေးလေးပေါ့…. (အလုပ်တွေများရင် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တက် ဂိမ်းကစားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်)… ဖေ့ဘွတ်ဂိမ်းတွေကစားရင်တောင် Farmville တို့ Cityville တို့ Restaurant City တို့မှာ ကိုယ်က ကြိုးစားပမ်းစား စိုက်ထားတဲ့ အပင်တွေမပုတ်အောင် ကိုယ့်မြို့လေး စည်ပင်ဝပြောနေအောင် စသည်ဖြင့် ကျားကုတ်ကျားခဲ ဆော့တတ်ကြသေးပါတယ်…
ဒီလိုပါပဲ… အလုပ်တွေများလာရင် လာခိုင်းတာတွေများလို့ ပိနေရင်လဲ ဂိမ်းထဲက ဂိုလ်း(Goal) တွေလာပေးသလိုပဲမှတ်လိုက်ပါတယ်… ဂိမ်းထဲမှာ ဂိုလ်းတွေကုန်သွားရင်တောင် ဆော့ရတာနည်းနည်းပျင်းဖို့ကောင်းသွားတာ… ခုလဲ သူတို့ကို ဂိုလ်းတွေလာလုပ်ခိုင်းတာကိုလဲ ဒီလိုပဲသတ်မှတ်ပါတယ်… အဲဒိအခါမှာ ကိုယ့်ကို လာခိုင်းတဲ့သူကို ကိုယ်က မျက်နှာရိတ်နဲ့ မကြေနပ်တာပြမိတာတို့… အလုပ်ရှုပ်ရတဲ့အထဲ လာပြန်ပြီဆိုတဲ့ ကိုယ့်အတွင်းစိတ်လေးပေါ်သွားတာတို့ မဖြစ်တော့ပါဘူး… ဂိမ်းထဲက ဂိုလ်းလိုပဲ အပြုံးမပျက်လက်ခံလိုက်နိုင်ပါတယ်… ကိုယ်လုပ်ပေးရမှာ သေချာရင်ပေါ့လေ… ကိုယ်ငြင်းလို့ရရင်လဲ ဂိမ်းထဲက ပိုက်ဆံနဲ့လိုက်ဝယ်ခိုင်းနေတဲ့ ကြော်ငြာတွေကို အမှားလေးနှိပ်ပိတ်လိုက်သလိုပဲ အေးဆေးကောင်းမွန်စွာ ငြင်းလိုက်ပေါ့… ကိုယ်ငြင်းလို့မရမဲ့ အလုပ်မျိုးကို ကိုယ်က သွားညူစူပြလိုက်ရင် ကိုယ်က အလုပ်မကြိုးစားသူလို့ အမြင်ခံရမဲ့အပြင် ထိုသူကလဲ ကိုယ့်ကို စိတ်ကွက်သွားနိုင်တယ် (အထူးသဖြင့် အထက်အရာရှိတွေ)… လုပ်ပေးရမဲ့အတူတူ ကျေးဇူးတင်ခံလိုက်ပါ…
ဂိမ်းထဲက အကောင်လေး မမောနိုင် မပန်းနိုင် အပင်တွေစိုက်သလို… စားပွဲတွေထိုးသလိုပေါ့… ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဲဂိမ်းထဲက အကောင်လေးလို သဘောထားလိုက်ပေါ့…
အလုပ်တွေပုံလာရင်လဲ အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေကို ဦးစားပေးပြီး တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုလုပ်ပေး… အထူးသဖြင့် နေ့အကန့်အသတ်နဲ့ ပြီးရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကို Cityville က ခုနောက်ပိုင်းလာနေကျ Goal တွေလို အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့လုပ်ရသလိုပေါ့… အဲလိုမှမဟုတ်ပဲ အားလုံးက ဒီအချိန်ပြီးရမယ်ဆိုပြီးလာရင်တော့ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်အဆင်ပြေတာကို မခိုမကပ်ပဲ လုပ်ပေးလိုက်… မပြီးတော့လဲ ကိုယ်လုပ်နေတာပဲ ဘာကြောင့်မပြီးတာလဲ ပြနိုင်ရင်ရပြီ… ဂိမ်းတွေထဲက တစ်ချို့ ဂိုလ်းတွေ မပြီးသလိုပဲပေါ့… ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဆင်းရဲပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် Stress ဖြစ်မနေသင့်ဘူး… “ကိုယ့်ကို Stress ပေးနိုင်တာ ကိုယ့်စိတ်ကလွဲလို့ ဘယ်သူဋ္ဌေးမှ မလုပ်နိုင်ဘူး”… ကိုယ့်ဘက်က အစွမ်းကုန်လုပ်ပေးထားတာကို အကောင်းမပြောလဲ သူတို့အပြစ်ပဲ… ကိုယ့်ကြိုးစားသလောက် သူတို့အသိအမှတ်မပြုလဲ ဒီလိုပဲနေလိုက်… ကိုယ်ပေးသလောက်မရရင် အလုပ်ပြောင်းဖို့ပဲရှိတယ်… ဒီကုပ္မဏီကိုယ်ပိုင်တာလဲမဟုတ်ဘူး… ကိုယ်မတတ်နိုင်တော့လို့ ဒီအလုပ်မပြီးလဲ အချိန်တန်ကိုယ်လခရမှာပဲ… Bonus matter တော့ရှိတာပေါ့လေ…
တစ်ကယ်လို့ ကိုယ်က Customer တို့ ဘာတို့နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်စေ… ဒီလူကူညီမှ ကိုယ့်အလုပ် အဆင်ပြေမယ်ဖြစ်စေ ဆိုရင်တော့ သူတို့ကျေနပ်အောင် ကိုယ့်ဘက်က ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြောဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ Pet society ကစားနေတယ်လို့ သဘောထားလို့ရပါတယ်… Pet Society ကစားတဲ့အခါမှာလဲ အထဲက အကောင်လေး ပျော်အောင် သန့်ရှင်းအောင် ကျန်းမာအောင် မျိုးစုံပြုစုပျိုးထောင်ပေးရတယ်မှတ်လား… ကိုယ်လုပ်ပေးနေတာတောင် မကျေနပ်နိုင်တဲ့သူဆိုတော့လဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စိတ်ထဲ မေတ္တာပို့ချင်သလောက်ပို့ပေါ့ သူမကြားစေနဲ့.. Pet Society ထဲက အကောင်လေးတွေကိုလဲ ကျွန်မစိတ်တိုလာရင် အပြင်မှာ အော်ဟစ်ဆူမိတာပဲ အမြင်ကပ်ရင် ပြစ်ထားလိုက်တာ ကိုယ်ဘယ်လောက်အော်အော်ဆူဆူ အဲဒိထဲက အကောင်လေးမကြားနိုင် နားမလည်နိုင် သလိုပေါ့… အဲဒိလူတွေကိုလဲ Pet Society ထဲက အကောင်လေးတွေလိုပဲ သဘောထားလိုက်ရင် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဒေါသဖြစ်နေတာတွေပျောက်ပြီး သူတို့ကို တွေ့တာနဲ့တင် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ပြုံးချင်လာလိမ့်မယ်… ကိုယ့်စိတ်ရွှင်တော့ သူတို့နဲ့ ဆက်ဆံရ အဆင်ပြေတာပေါ့… အရမ်းကိုမှ ဆက်ဆံရခက်ခဲတဲ့ လူမျိုးဆိုရင်တော့ တစ်ချို့ဂိမ်းတွေမှာ အခန်း၁ခန်းအောင်တော့မယ်ဆိုရင် ဆရာကြီးနဲ့ ချရတယ်မှတ်လား… အဲဒိတုန်းကတောင် ကျားကုတ်ကျားခဲ မနိုင်မချင်း အကြိမ်ကြိမ် ချကြသေးတာ… အဲဒိလူမျိုးကိုလဲ ငါ့ဘ၀ရဲ့ Stage တစ်ခုကို အောင်ဖို့ ချနေတဲ့ အကောင်ကြီးပါလားလို့သတ်မှတ်လိုက်ရင် သူ့ကိုလဲ သိပ်မမုန်းတော့ပဲ ကိုယ့်ကိစ္စအောင်မြင်ဖို့ဆိုတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကိုပဲ ဦးတည်ဖြစ်တော့မှာဖြစ်တယ်…
ဟိုနေ့က အလုပ်ပြန်ခါနီးမှ ကိုယ့်အမှားကြောင့်မဟုတ်ပဲ သူ့အမှားကြောင့် အားလုံးပြန်ပြင်ရမှာကို ၁၅မိနစ်ပဲ အချိန်ပေးပြီးလာခိုင်းတဲ့ အရာရှိကို စိတ်ထဲတော်တော်လေး စိတ်တိုသွားတယ်… ဒါပေမဲ့ “အော်… ဒါ CityVille ထဲကလိုပဲ ငါ့ကို ဂိုလ်းလာပေးတာ ပြီးပြီးမပြီးပြီး ကွန်ပလိမ်းမများပဲ လုပ်ပေးလိုက်မယ်… မပြီးတော့လဲ မပြီးဘူးပေါ့ ဘာဖြစ်လဲ “ ဆိုပြီး လုပ်ပေးလိုက်တော့ ပျော်စရာတောင်ကောင်းသွားတယ်… သူပြောတဲ့အချိန်အတွင်းလဲ ပြီးသွားလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် အံ့သြသွားတယ်… ဒါတောင်သူစစချင်လာခိုင်းတုန်းက ဒေါသတစ်ချက်ထွက်သွားတာ နည်းနည်းပေါ်သွားတယ်… တော်သေးတယ်ဘာမှ မပြောလိုက်လို့… ဒါပေမဲ့ သူ့ကို အလုပ်ပြီးလို့ပြန်ပေးတော့ ကိုယ်က ရီရီပြုံးပြုံးပဲ ဂိမ်းတစ်ခုအောင်သွားတယ်သဘောထားပြီး ဆော့လိုက် (လုပ်လိုက်တော့) သူကတောင် ကျေးဇူးတွေတင်လို့… မဟုတ်ရင် လုပ်လဲပေးရအုံးမယ်… အမြင်လဲကပ်ခံရမယ်… ဒီတော့ ဆော့နေတယ်သဘောထားလိုက် (ဆော့ဖို့ဆို မဗေဒါက ဒီအရွယ်ထိ ထိပ်ဆုံးကပဲ)
ဒီနည်းလမ်းက ၁၀၀% ကောင်းပါတယ် အောင်မြင်ပါတယ်လို့တော့ မဗေဒါအာမ မခံပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ စိတ်တိုတတ် ဆွာတတ်လွန်းတဲ့ ကျွန်မအတွက်တော့ ရန်သူနည်းသွားသလို လုပ်ငန်းခွင်မှာလဲ သာသာယာယာရှိလာပါတယ်… အထူးသဖြင့် အလုပ်မသွားချင်လောက်အောင် ပျင်းတဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင် “အော်… ငါ ဂိမ်းတွေ နေ့တိုင်းကစားပြီး ဂိမ်းထဲမှာနေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်နေသလိုပဲ… ခုလဲ ငါဘ၀ဂိမ်းကို ကိုယ်တိုင်ဝင်ကစားရမှာ ပျော်စရာကြီးပဲ” လို့တွေးပြီး အလုပ်သွားဖို့ ခြေလှမ်းတွေ ပြန်သွက်ခဲ့ပါတယ်…
အရင်က ကိုယ့်ကို အလုပ်ပိုတွေလာခိုင်းမှာလဲ ကြောက်တတ်တဲ့ကျွန်မ… ခုတော့ သူတို့လာခိုင်းတာကို ပြီးရင်လဲ လုပ်ပေးလိုက်တယ်… မပြီးတော့လဲ အရင်လို Stress ကြီးဖြစ်ပြီး ကိုယ့်တာဝန်ကြီးလို စိတ်လေးမနေတော့ပဲ ဘာလုပ်နေလို့ မပြီးဘူးလဲဆိုတာ သေချာရှင်းပြလိုက်တော့လဲ လူတွေက နားလည်ကြပါတယ်…
အလုပ်မှမဟုတ်ဘူး ဘ၀ရဲ့ အခက်အခဲတွေ အဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံလာရင်လဲ Level မတူတာပဲရှိမယ် သဘောတရားတူတူပဲ သဘောထားပြီး တဖြည်းဖြည်း ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့... ဒါပေမဲ့ မဗေဒါကိုယ်တိုင်တောင် ဒီလောက်ထိ ရင့်ကျက်လှနေတယ်မဟုတ်တော့လဲ ခပ်မြင့်မြင့်ကြီးတွေနဲ့ လေမကျယ်ချင်ပါဘူး... ကိုယ်လဲ ကြိုးစားဆဲပဲ... ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းက မဗေဒါနဲ့တော့ ခုချိန်ထိကိုက်နေတုန်းပဲ... ဖေ့ဘွတ်က ဂိမ်းတွေကစားရင်းလဲ အကြိုးအမြတ်လေးတွေရှာလို့ရပါတယ်... (အဟိ)
ကဲ အားလုံးပဲ ဘ၀ဂိမ်းမှာ Stage တွေ အဆင့်ဆင်ကို ကျော်လွှားပြီး ထိပ်ဆုံးကို ရောက်နိုင်ကြပါတယ်… စိတ်ညစ်လို့ ကိုယ့်အသက်ကိုယ်အရှုံးပေးရင်တော့ Game Over ဆိုပြီး နောက်တစ်ခေါက်ကြိုးစားခွင့်တော့ မရှိဘူးကွယ်… ဒီဘ၀ဂိမ်းက တစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲ မသေမချင်းတော့ ကစားလို့ရတယ်…
Posted by mabaydar at 3:55 PM4comments :
Labels: Game , Knowledge
ဒီနေ့ ဂူဂဲလ်ပလပ်စ်မှာ ဟိုလျှောက်ကြည့် ဒီလျှောက်ကြည့်ရင်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုအကြောင်း သွားတွေ့ပါတယ်… အဲဒါကတော့ တရုတ်ပြည် Hunan မှာရှိတဲ့ The Zhangjiajie National Forest Park မှာရှိတဲ့ Tianman တောင်ထိပ်ပေါ်မှာ တောင်နံရံကို ကပ်ပြီး ဖန်နဲ့ဆောက်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်း ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်…
ဒါနဲ့ သိချင်လို့ ထပ်ရှာကြည့်တော့ ဒီလမ်းကြောင်းကို ၇ရက် ၁၁လ ၂၀၁၁ ကမှ ခရီးသွားများအတွက် စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပါ… ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၄၃၀ မီတာ (၄၇၀၀ ပေ) မြင့်ပါတယ်… ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမြင့်ဆုံးတောင်တက်လမ်းထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်… စုစုပေါင်း လမ်းကြောင်း အရှည်က ၆၉မီတာ (၂၀၀ ပေ) ဖြစ်ပါတယ်… ဖန်သားအထူက ၃လက်မပါ… လာရောက်လည်ပတ်သူတွေကို ဖန်ပေါ်တွင် မချော်လဲစေရန် သင့်တော်တဲ့ဖိနပ်များကို စီးဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်…
နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကတော့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က ထွက်တဲ့ “Avatar” ဇာတ်ကားထဲမှာပါတဲ့ ကောင်းကင်ပေါ်မှာ ပျံနေတဲ့တောင်တွေ “Hallelujah Mountain” ကို ဒီဇိုင်းဖော်တဲ့အခါမှာ ဒါရိုက်တာနဲ့ ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ အတွေးကို စတင် အခြေခံပေးလိုက်တဲ့ တောင်တွေလို့သိရပါတယ်… ဒီတောင်တွေထဲက တစ်တောင်ကို ယခုအခါမှာ “Avatar Hallelujah Mountain” လို့တောင် တရားဝင် နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်…
Now name as Avatar Hallelujah Mountain
ဒီ သတင်းအချက်အလက်တွေရဖို့ ဟိုရှာဒီရှာလုပ်ရင်း အများသူငှာတွေရဲ့ အမြင်ကိုလဲ ဖတ်ခဲ့ရလို့ ကျွန်မသာဆိုရင်ရောလို့တွေးဖြစ်ပါတယ်… ဟုတ်ပါတယ်… ကျွန်မကတော့ လုံခြုံမှု အသက်အန္တရာယ်ကို မယုံကြည်တဲ့အတွက် အဲဒိ ဖန်လမ်ကြောင်းပေါ်ကို တက်မလျှောက်ရဲပါဘူး… အောက်ပါလူတစ်ချို့ တွေကလဲ ဒီလိုပြောထားကြပါတယ်… http://thecornfieldonline.com ဖိုရမ်မှာ ဆွေးနွေးထားကြတာကို ကောက်နုတ်ပါတယ်…
The real fear is that it was built by the Chinese. it could come down any time.
I'll stick with the ledge at the Sears, er, Willis Tower in Shitcago.
(တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတာက တရုတ်ပြည်က ဆောက်ထားလို့ပဲ… အချိန်မရွေးပြိုကျနိုင်တယ်…
ငါကတော့ ချီကာဂိုက Sears, Willis Tower တွေပဲသွားတော့မယ်…)
Who the hell knows what those bolts and fasteners are made from, how they were made, and even if they were tested.
No thanks. Track record and all that.
(ဒီလက်ရမ်းတွေ ဒီမူလီတွေ ဘယ်ကနေထုတ်တာလဲ၊ ဘယ်လိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာလဲ၊ ဒါတွေက (လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့) စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရဲ့လား ဆိုတာ ဘယ်သူသိလဲ…
ကျေးဇူးပဲ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မအတွက်တော့ (ဒီခရီးက) မလိုအပ်ဘူး..)
Made by China, following Chinese "regulations". See all pics.
(တရုတ်ကလုပ်တာလေ… တရုတ်ပြည်စည်းကမ်းတွေအတိုင်းလိုက်နာပြီးလုပ်ထားတာပေါ့… ကျွန်တော်လဲ Pass ပဲဗျာ…)
..the railing/fasteners are stainless steel. it is very obvious. not going anywhere either.
(လမ်းကြောင်းကို ပတ်ထားတာတော့ stainless စတီးဆိုတာ အသိသာကြီး… ကျွန်တော်လဲ ဘယ်မှမသွားပါဘူး…)
I still wouldn't do it. (အမြင်အရတော့ လုံခြုံမှု အသေအချာ ရှိတယ်ဆိုတယ်လို့ ထင်ရတာပဲ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တော့ မသွားဘူး)
Google+ က ဓာတ်ပုံတင်တဲ့သူမှာရတဲ့ ကွန်မန့်တွေမှာတော့ တချို့ကလဲ မိုက်တယ်… သွားချင်တယ်… လှလိုက်တာ … အံ့သြစရာကောင်းအောင်လှလိုက်တာ… အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ အနုပညာပဲ စသည်ဖြင့် ချီးကျူးထားကြသူတွေရှိသလို တချို့သူတွေကလဲ အပေါ်က ဖိုရမ်ထဲကလူတွေလိုပဲသဘောမတူကြပါဘူး..
လူတစ်ယောက်ဟာ အတွေးအခေါ်တစ်မျိုးစီကွဲပြားကြပါတယ်… ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်… ကျွန်မဒီဓာတ်ပုံတွေကို တွေ့တော့ ဘယ်နေရာလဲမသိဘူးဆိုပြီး ခရီးသွားဝါသနာပိုးအရ ရှာကြည့်မိပါတယ်… ဒါပေမဲ့ တရုတ်ပြည်ဆိုတာတွေ့ရတော့ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ စိတ်ထဲအောင့်သက်သက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်… ဒီပိုစ့်ကို ရေးဖို့ အချက်လိုက်ရှာတော့မှ သူများတွေကွန်မန့်တွေဖတ်ပြီး ကျွန်မစိတ်ထဲက အောင့်သက်သက်ဖြစ်တာကို ရှင်းသွားတော့တယ်… တရုတ်ပြည်ကဆောက်တဲ့ ၃လက်မအထူရှိ တောင်နံရံမှာကပ်ဆောက်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းကို လျှောက်ဖို့ဆိုတာ ယုံကြည်မှုနဲ့ အများကြီးဆိုင်ပါတယ်… ဆောက်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ယုံကြည်လား၊ ဆောက်လုပ်သူတွေကို ယုံကြည်လား၊ ဒီလမ်းကြောင်းကို ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောင့်ရေး ကို ယုံကြည်လား… နောက်ဆုံးကုန်အောင်ပြောမယ်… အတူတူလမ်းလျှောက်နေတဲ့ ဘေးက လူက အဲဒိပေါ်မှာ မခုံပါဘူး မအံပါဘူး လက်မကစားပါဘူး မဖျက်စီးပါဘူးလို့ယုံကြည်လား… ဒါတွေအားလုံးကတော့ သင့်ရဲ့ ခံယူချက်ပေါ်ပဲမူတည်တယ်…
ကျွန်မအတွက်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာခေတ်စားနေတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို သွားသတိရတယ်… “တရုတ်စက်၊ တရက်စုတ်” တဲ့… တရုတ်ကထုတ်တဲ့စက် ၁ရက်ထဲနဲ့ စုတ်တယ်လို့တောင် တဘောင်ထွက်သတဲ့… ကိုယ်ကိုတိုင် တရုတ်ပြည် ရှန်ဟိုင်းကို အလည်အပတ်ရောက်တုန်းကလဲ တန်းစီရမဲ့နေရာတန်းမစီတာတို့ ကျော်တက်တာတို့… ဂိုက်ကလဲ ခရီးသည်ကို ဂရုမထားတဲ့အပြင် ငွေညှစ်ဖို့ပဲ ကြိုးစားနေတာတို့ စတဲ့စတဲ့ မကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ၀န်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရတော့ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ တရုတ်ပြည် ဂရိတ်ဝေါလေးသွားဖို့တောင် ခုထိ ခြေတုံချတုံနဲ့ စိတ်ကို တော်တော်လေးပြင်ဆင်နေရတယ်….
ဒါ့အပြင် ဖြစ်သမျှကြည့်လိုက်… လူသားချင်းမစာနာမှုတွေ (ကလေးကို ကား ၂ဆင့်တက်ကြိတ်တာတောင် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ သူတွေ)၊ အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေ (လူငယ် ၂ယောက်ကို ကားနဲ့တိုက်လို့ ၁ယောက်သေတာတောင် ဘေးကလူတွေကို “တိုင်ရဲရင်တိုင်လိုက် ငါ့အဖေက ဘယ်သူ” ဆိုပြီး စိန်ခေါ်သွားတာတွေ)၊ လူကို အန္တရာယ်ပြုမဲ့ စံချိန်မမှီတဲ့ အစားအသောက်တွေ (ကလေးနို့မုန့်တွေနဲ့ စားသုံးကုန်တွေမှာ မယ်လမင်းတွေထည့်ထုတ်တာ)၊ စတဲ့ တခြားသော ပြဿနာများကလဲ ဖြစ်လိုက်ရင် တရုတ်ကချည်းပဲ… လူမျိုးရေး နိုင်ငံရေး ပုတ်ခတ်ခြင်းမဟုတ်ရပါ… ကြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကြောက်စရာတွေ အများကြီးလို့လဲ ကပ်ပြောနိုင်ပါတယ်… သို့သော် ကိုယ်သွားချင်တဲ့ နေရာတစ်ခုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ သမိုင်းနဲ့ အလေ့အထကိုတော့ ဆင်ခြင်သင့်တယ်ထင်လို့ပါ… ဖန်လမ်းကြောင်းခြင်းအတူတူ USA Grand Canyon ကိုပဲ ကျွန်မ သွားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်…
ကဲ… စာဖတ်သူတို့ရော ဘယ်လိုသဘောရကြလဲ… လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်နော်…
Glass walk at Grand Canyon, USA
Source : http://www.amusingplanet.com/2010/06/zhangjiajie-national-forest-park.html
Posted by mabaydar at 5:17 PM 8 comments :
Posted by mabaydar at 11:55 PM 8 comments :
Posted by mabaydar at 5:05 PM 18 comments :
ဘယ်အရာမဆို အိုင်ဒီယာကောင်းဖို့က အရေးကြီးပါတယ်... တချို့အရာလေးတွေကို ကိုယ်ဘယ်လောက်စဉ်းစား စဉ်းစား ဘယ်လို အကုန်ကျခံထား ခံထား နောက်ဆုံးကျရင် အိုင်ဒီယာကောင်းတဲ့သူကပဲ ကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းနဲ့ပဲရိုက်အုံး လူကြိုက်ပိုများတတ်ကြပါတယ်... မဗေဒါလဲ ကျောင်းက ဓာတ်ပုံ assignment တွေလုပ်မှ ကိုယ်တော်တော် အိုင်ဒီယာမထွက်လို့ အတော်လေးစိတ်ပျက်ရပါတယ်... တစ်ခါတစ်လေ အွန်လိုင်းမှာ references တွေရှာကြည့်ရင် သူများတွေလုပ်ထားတွေတွေ့မှ အော် ဒါလေးက ဒီလိုလုပ်ရင် လွယ်လွယ်လေးပဲဆိုပြီး ဖြစ်ရတဲ့အခါတိုင်း "ဒါကိုဘာလို့ ငါ့ဘာသာငါမသိပဲ သူများလုပ်တာကြည့်ပြီးမှ နားလည်တာလဲ" ဆိုပြီး မခံချိ မခံသာနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ပျက်ရပါတယ်...
ပရိုဂရမ်းမင်း ဘာသာကို မဗေဒါ အရင်က လက်လျှော့လိုက်တဲ့ အထဲမှာ အဲဒိပြဿနာကြောင့်လဲပါပါတယ်... ကိုယ့်ဘာကိုယ်ရေးဆိုရင် concept တွေ command တွေ အားလုံးသိပါရဲ့ ဘယ်က စရေးရမှန်းကို မသိဘူး... သူများရေးပြီးသွားရင်တော့ ဖတ်ကြည့်ရင် နားလည်တယ်... စိတ်ဓာတ်ကို ကျရော... မဗေဒါလို ခံစားဖူးတဲ့သူရှိကြလားတော့ မသိဘူး... ဒါပေမဲ့ ပရိုဂရမ်းမင်းကို ကြိုက်တဲ့သူတွေကျတော့လဲ အဲလို ထိုင်စဉ်းစားနေရင်း အဖြေကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားရတာကို ကြိုက်တာတဲ့... အင်းပေါ့လေ... အဖြေရသွားရင်တော့ အရမ်းကို ပျော်ရတာသိပါတယ်... မဗေဒါမှာ ပါရမီမပါလို့လားတော့ မသိပါဘူး... ကျောင်းမှာ နောက် semester ကျရင် C++ ယူရတော့မယ်... ညစ်တယ်... ဆီပရိုဂရမ်းမင်း တတ်တဲ့သူတွေရှိရင် ဆရာတင်ပါတယ်နော်... ကူညီကြပါ...
ကဲ... ပြောချင်တာကတခြား ရောက်သွားတာက ပရိုဂရမ်းမင်းအကြောင်း... လိုရင်းကို ပြန်ဆွဲရရင်... ဒီနေ့ အင်တာနက်မှာ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ရှိတဲ့ ခန်းတွင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲ တန်ဆာဆင်ပြီး အိပ်ယာပေါ်မှာ အိုက်တင်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရိုက်ထားတာလေးက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေလို့ပါ... ပြီးတော့ အိုင်ဒီယာလေးကောင်းလိုက်တာဆိုပြီး သဘောကျလို့ အားလုံးကြည့်ရအောင် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်...
Posted by mabaydar at 10:14 AM6comments :